Xildhibaanno badan oo qorsheynaya in ay isaga baxaan xisbiyadooda siyaasadeed – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanno badan oo qorsheynaya in ay isaga baxaan xisbiyadooda siyaasadeed
Star FM September 9, 2016
Mudaneyaal fara badan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa qorsheynaya in ay faarujiyaan xisbiyada siyaasadeed ee ay hadda ka tirsan yihiin, iyagoo ka cabsi qaba in laga hor istaago in ay u tartamaan xilalka siyaasadeed ee doorashada guud ee xigta.
Xildhibaannadaan ayaa sheegay in ay hoggaamiyeyaasha sar sare ee xisbiyadooda damacsan yihiin in ay ka qadiyaan magacaabista siyaasiyiinta loo xulanayo tartanka kuraasta doorashada guud ee la filayo in ay dhacdo bisha 8-aad ee sanadka soo socda ee 2017-ka.
Waxa ay mudaneyaasha walaacaan muujinaya sheegeen in axsaabtooda ay doonayaan in ay arrintaasi uga faa’ideystaan kuna hir galiyaan hindise sharciyeedka cusub ee ku saabsan xakameynta dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta ka tirsan xisbiyada ee rajadooda ku guul dareysta.
Hindise sharciyeedkaas oo loo gudbiyay aqalka baarlamaanka ayaa dhigaya in siyaasi kasta oo xisbigiisa ka waaya boos uu ugu tartamo kursi siyaasadeed uusan ka bixi Karin xisbigaasi.
Xisbi siyaasadeedyada ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin TNA, URP iyo ODM ayaa u xusul duubaya sidii loo ansixin lahaa hindise sharciyeedkaasi oo soo afjaraya wadadii u furneyd siyaasiyiinta ku guul dareysta kalsoonida xisbiyadooda, kuwaas oo ay markii hore u furnaan jirtay in ay xisbi kale ku biiraan.
Siyaasiyiinta aan hubin mustaqbalkooda xisbiyada ay ka tirsanyihiin ayaa aaminsan in xeerka loo ololeynayo uu dan u yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta, ku xigeenkiisa William Ruto iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee kala ah Raila Odinga oo hor kacaya xisbiga ODM iyo dhigiisa xisbiga WIPER Kalonzo Musyoka.
← Raila Odinga oo dib usoo cusbooneysiiyay eedeymaha ku saabsan lacagta Eurobond
Kuuriyada waqooyi oo sameysay tijaabo cusub oo hubka Nuclierka ah →